Izindaba - Ngabe isihlanza amanzi siwusizo? Kungani ubeke ukotini we-PP kuqala? I-Xinpaez ikuthatha ukuthi uqonde isihlungi sikakotini we-pp
Ingabe isihlanza amanzi siwusizo? Kungani ubeke ukotini we-PP kuqala? I-Xinpaez ikuthatha ukuthi uqonde isihlungi sikakotini we-pp
Kokuhlanza amanzi amaningi emndenini, into yokuhlunga esiteji sokuqala iyinto yesihlungi se-PP ukotini. Isici sesihlungi sesigaba sokuqala asithinti ngqo kuphela ikhwalithi yamanzi, kepha sithinta nomphumela wokuhlunga wesigaba esithathu noma wesigaba sesine nempilo yento yokuhlunga, ngakho-ke i-PP Izinga lesihlungi sekotini libaluleke kakhulu isihlanza amanzi.
1. Siyini isihlungi se-PP ukotini? Ziyini izinzuzo?
Isici sesihlungi se-PP ukotini: into engeyona enobuthi futhi engenaphunga le-polypropylene particle, into yokuhlunga eyi-tubular elimele futhi eboshwe ngokushisa, ukuncibilika, ukuphotha, ukudonsa, nokwamukela ukwakheka. Ukunemba okuphezulu kokuhlunga kungafinyelela ku-1 Micron. Ukwakheka kwento yokuhlunga kuhlungiwe kusuka ngaphandle kuye ezingeni elingaphakathi. Ukusondela kusendlalelo sangaphakathi sento yokuhlunga, kuncane usayizi wepore futhi kuphakama ukunemba kwesihlungi. I-PP ukotini inezici zokugeleza okukhulu, ukumelana nokugqwala, ingcindezi ephezulu nezindleko eziphansi. Isetshenziselwa kakhulu ukuvimba izinhlayiya ezinkulu ezifana nokugqwala, inzika, nezinto ezimisiwe emanzini.
1. Ukuzinza kwamakhemikhali kokotini we-PP kuhle kakhulu. Ukuzinza kwamakhemikhali kukotini we-PP kuhle kakhulu. Ngaphezu kokugqotshwa yi-sulfuric acid egxilile ne-nitric acid egxilile, ayiphenduli ngamakhemikhali namanye amakhemikhali. Ngakho-ke, ingamelana ne-asidi, i-alikhali, izinyibilikisi eziphilayo kanye namafutha ngaphandle kokukhathazeka ngokungcoliswa kwayo okwesibili.
2. Abukho ubungozi bokungcola ngezinye izinto zokusetshenziswa ngenkathi kuhlanganiswa ama-cores wokuhlunga okotini we-PP. Ukuhlanganiswa kwama-cores wokuhlunga okotini we-PP akudingi ukusetshenziswa kwezinye izinto. Kuya ngokuzibophezela kwayo nokuhlanganayo ukwenza amafilitha wokuhlunga osayizi abahlukahlukene. Kukhona ingozi yokungcoliswa ezinye izinto zokusetshenziswa.
3. Isihlungi se-PP ukotini asidingi ukucindezelwa kokuphakelwa kwamandla. Ngesikhathi senqubo yokuzibamba, isakhiwo esinezinhlangothi ezintathu ze-labyrinth microporous sakhiwa, esinendawo enkulu ethile ebanzi kanye ne-porosity ephakeme. Lokhu kuvumela isihlungi sikakotini se-PP ukuthi siqukathe inani elikhulu lokungcola, futhi ngasikhathi sinye sivumela amanzi ukuthi adlule ngokukhulu ukushesha ngaphandle kwesidingo samadivayisi wokunyusa ingcindezi. Lokhu futhi kusho ukuthi into yokuhlunga ukotini we-PP ayidingi ukukhuphula amandla.
4. Ukungcola okungu-80% yi-PP cotton multi-layer filter filter ku-PP cotton filter, ungqimba ngalunye lungavimba futhi lugcine ukungcola emanzini. Imicu engxenyeni engaphandle iyajiya, imicu engxenyeni engaphakathi inciphile, ungqimba lwangaphandle lukhululekile, futhi ungqimba lwangaphakathi luqinile, lwakha isakhiwo semigqa eminingi. Ngalesi sakhiwo esinezendlalelo eziningi, umthamo wokubamba ukungcola uzoba mkhulu, futhi okungu-80% kokungcola okucocwe ngesihlanza amanzi kuqediwe kusihlungi se-PP sikakotini.
Lawa maphuzu angama-4 angenhla izinzuzo zesihlungi sikakotini se-PP kusihlanza amanzi. Ngaphezu kwalokho, kufanele kuqashelwe ukuthi impilo yensiza yesihlungi sikakotini se-PP imvamisa iyizinyanga ezi-3-6, futhi kufanele ithathelwe indawo njalo ukuqinisekisa umphumela wokuhlanzwa kwamanzi. Izindleko zikakotini we-PP ziphansi, futhi imvamisa zisetshenziswa kulayini wokuqala ngemvamisa yokuphindisela ephezulu ukufeza umphumela wokunciphisa izindleko.
2.Ungayibona kanjani ikhwalithi yesihlungi se-PP ukotini?
Ikhwalithi yesihlungi sikakotini se-PP sinqunywa ukuqina kwemicu yayo. Imicu yangaphakathi yesihlungi sekotoni esezingeni eliphakeme le-PP iqinile futhi iyafana, futhi lo mehluko awunakubonwa ngamehlo ngesikhathi sokuthenga. Kufanele sehlukanise kanjani?
Okokuqala: bheka isisindo. Singasikala isisindo ngezandla zethu. Uma isisindo sisinda, ubukhulu be-fiber bento yokuhlunga bukhulu futhi nekhwalithi iba ngcono.
Okwesibili: bheka indaba. Lapho ukhetha into yokuhlunga, kufanele ube nethemba ngokuqukethwe kwento yokuhlunga. Umbala wephepha lesihlungi elijwayelekile uyunifomu kanye nephepha libushelelezi. Umbala wephepha lesihlungi lesici sesihlungi esiphansi awufani, futhi ukuthungwa akulungile.
Okwesithathu: bheka ukucindezela. Ngokuvamile, ubukhulu be-fiber yesici sesihlungi, ngcono ukusebenza kokucindezelwa, futhi ngcono ikhwalithi yento yokuhlunga ukotini we-PP. Singamahlulela ngokuthinta. Ukuqina kokuthinta, kungcono ukusebenza kokucindezelwa.
Okwesine: bheka i-colloid. Into yokuhlunga ejwayelekile inekhwalithi enhle ye-gel nokunwebeka okuhle, kuyilapho irabha yento yokuhlunga engaphansi ithambile futhi inokuthungwa okungalungile.
3. Ungabona kanjani ukuthi isihlungi sikakotini se-PP sidinga ukushintshwa? Yini okufanele inakwe lapho kushintshwa i-PP cotton?
Isihlungi esisha se-PP sikakotini simhlophe. Ungahlukanisa ukuthi ngabe izinga lamanzi lingcolile noma liphansi ngezinga lomzimba omnyama ngemuva kokuthi kusetshenziswe ukotini we-PP.
Qaphela: Isici sesihlungi kufanele sishaywe ngemuva kokufakwa. Isikhathi esivamile sokukhipha kufanele sibe ngaphezu kwemizuzu engu-5.
Into yokuhlunga ukotini i-PP ingeyesigaba sokuqala sesihlungi se-purifier yamanzi. Ukungcola okungaphezulu kuhlungwa, kulula ukuthi into yokuhlunga ivinjwe. Ngakho-ke, impilo yento yokuhlunga ukotini ka-PP imfushane kakhulu. Indawo enezinga eliphansi lamanzi ingadinga ukubuyiselwa ezinyangeni ezintathu. Indawo enekhwalithi engcono yamanzi akufanele yeqe izinyanga eziyi-9 ngokude kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, ukushintshwa kwento yokuhlunga kulula, futhi abasebenzisi be-Aspline abanamandla okusebenzisa bangayifaka esikhundleni sencwajana yemiyalo, engafakwa ngaphandle kwenkosi, futhi ingagcina nezindleko ezithile.